Sei dermatologist yave ecommerce | ECommerce nhau
Hazvisi chakavanzika kune chero munhu kuti iro denda ra2020 rakamanikidza vazhinji (mutsika inochengetedza) masangano uye vanhu kuita pinda mue-commerce kuitira kuti varambe vachishandisa mabhizinesi avo. Nekudaro, e-commerce yakaratidza kuve inobatsira kupfuura zvavaitarisira nekuti vazhinji vakakwanisa kuwedzera kuwedzera mabhizinesi avo, kungave kupa zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi nemutengo wakaderera kwazvo.
Imwe yeaya akabudirira kesi anga ari eanozivikanwa dermatologist NaFelipe Madrid iyo, semhedzisiro yeinonzi "nyowani yakajairika", yakwanisa kuwedzera bhizinesi rayo nekupa kwete chete mabasa ehunyanzvi, asiwo zvigadzirwa. Uye ndizvo izvo Chitoro chaFelipe Ndiimwe yemienzaniso yezve e-commerce inogona kupa kune vamwe vanhu vanofarira kuita.
1 Chii chinogona kupa e-commerce kune vamwe vanhu?
1.1 Svika pakuziva vatengi vako
1.2 Dzivisa kuwira mu "mutengo wehondo"
Chii chinogona kupa e-commerce kune vamwe vanhu?
Kusiyana nezvinorambidzwa zvine musoro zvinoshanda muzvitoro zvepanyama, munyika yedhijitari zvinokwanisika kuenzanisa ipa zvese uye nemutengo wakaderera. Panyaya ye e-commerce yedermatologist Felipe, kwete chete iwo mabasa ehunyanzvi akajairwa ehunyanzvi hwekurapa anopiwa, asi bhizinesi rinoenderera mberi:
Un hombe katarogu yezvigadzirwa uye zvigadzirwa
Sevhisi kuburitswa kwemahara kumba uye kudzoka
Izvo zvakakosha kuti urangarire kuti hazvidi kuti uve nemadhipatimendi ezvitoro kana panyama uve nechigadzirwa chakapihwa. Muchokwadi, mune akawanda mamiriro, iye e-commerce muridzi haatomboona kuti chigadzirwa chakaita sei. Vanozviita sei izvozvo? Zvakanaka, kushandisa e-commerce nzira senge kudonhedza
Shanduko iyi yakaitwa nemhando yebhizinesi yaFelipe inoshanda zvakanyanya kune chero mumwe nyanzvi (zvisinei nebasa ravo) kana munhu anoda kuita. Nekudaro, zvimwe zvakakosha zvinhu zvinofanirwa kutarisirwa kuti zvibudirire mue-commerce.
Svika pakuziva vatengi vako
Tsika, hunhu, zvaunofarira uye mapatani ekushandisa paInternet akasiyana zvakanyanya nevatengi vechinyakare. Muchokwadi, vashandisi avo vanowanzo tenga online vanochenjerera uye vanoziva, nekuti ivo vanobvunza pane akasiyana mawebhusaiti, pamwe nemagariro. Naizvozvo, kupa chete zvigadzirwa nemasevhisi hazvizokwana kuvakwezva, kuzvishandura kuva vatengi uye nekuzvichengeta.
Kuti usvike vangangoita vatengi zvinoda kushandisa nzira yekutaurirana yavanonzwa "kuenderana" uye haifanire kungotarisa chete mukusimudzira zvigadzirwa nemasevhisi. Vashandisi veInternet vanokoshesa chaizvo chokwadi chekuti taura nevanhu vari kumashure kwe-e-commerce.
Dzivisa kuwira mu "mutengo wehondo"
Kunyangwe chiri chokwadi kuti makwikwi paInternet "akapisa", izvi hazvireve kuti zvinofanirwa kuwira mukusanzwisisika kwekugadzira Hondo yemutengo kuti pakupedzisira zvichazongokwanisika kuenderera mberi nekukoshesa zita uye kudzinga vatengi vanogona kuve vatengi. Iwe unofanirwa kuve wakanyatso kujekesa kuti chinhu chimwe chete kupa madhora uye kukwidziridzwa, uye zvakati wandei kudzikisa mitengo kusvika padanho zvekuti haugone kana kuwana shoma purofiti.
Izvo zvakakosha kuti utaure kuti havasi vese vatengi vanotenga kubva kuchitoro chepamhepo vanozove vakanaka. Muchokwadi, vazhinji vevatengi veadhijitari havagumisi kuvimbika kune iyo brand.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Sei dermatologist yave ecommerce